Laser Makristasi Fekitori - China Laser Makristasi Vagadziri, Vatengesi
Isu tinopa akasiyana emhando yepamusoro laser makristasi, aine akasiyana masisitimu, akasiyana doping ions; maratidziro maererano nezvikumbiro, kusanganisira Neodymium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Nd: YAG), Erbium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Er: YAG), Holmium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Ho: YAG) ； Erbium uye ytterbium co-doped phosphate girazi (Er: Girazi) nezvimwewo, zvinosiyana sarudzo uye mhinduro dzakapihwa neDIEN TECH.
Nd, Cr: YAG Makristasi
Iyo YAG (yttrium aluminium garnet) laser inogona kudhonzwa ne chromium uye neodymium kuitira kusimudzira hunhu hwekudyiwa kweiyo laser. Iyo NdCrYAG laser yakasimba laser. Chromium ion (Cr3 +) ine yakafara yekumwa bhendi; inobata simba uye yoiendesa kune neodymium ions (Nd3 +) nenzira yekudyidzana kwedipole-dipole. Wavelength ye1.064 µm inoburitswa neiyi laser.
Nd: YAG Makristasi
Nd: YAG kristaro tsvimbo inoshandiswa muLatin yekumaka muchina uye mimwe michina ye laser.
Iyo chete ndiyo yakasimba zvinhu iyo inogona kushanda inoenderera firiji yemukati, uye ndiyo yakanyanya kunaka kuita laser kristaro.
Eri: YAG Makristasi
Er: YAG rudzi rweakanakisa 2.94 um laser kristaro, inoshandiswa zvakanyanya mu laser yekurapa system uye mamwe minda. Eri: YAG kristall laser ndiyo inonyanya kukosha ye3nm laser, uye iyo nzvimbo ine hunyanzvi hwekushanda, inogona kushanda mukamuri tembiricha laser, laser wavelength iri mukati mechikamu chevanhu ziso chengetedzo bhendi, etc. 2.94 mm Er: YAG laser ine rave richishandiswa zvakanyanya mukuvhiya kwekurapa, kunaka kweganda, kurapwa kwemazino.
Ho: YAG Makristasi
Ho: YAG Ho3+ Ions yakaiswa mukati mekudzivirira laser makristasi akaratidzira gumi nematanhatu emhando dzakasiyana-siyana dzeraser, anoshanda mune zvenguva modes kubva kuCW kusvika mode-yakavharwa. Ho: YAG inowanzo shandiswa senzira inoshanda yekugadzira 2.1-μm laser emission kubva ku 5I7- 5I8 shanduko, yezvekushandisa senge laser kure kuona, kuvhiya kwekurapa, uye kupomba Mid-IR OPO's kuti uwane 3-5micron emission. Direct diode pumped masisitimu, uye Tm: Fibre Laser yakapomba system yaratidza hi mutserendende hunyanzvi, vamwe vachisvika padanho rekuti.
Ce: YAG Makristasi
Ce: YAG kristalli yakakosha mhando yemakristani ekutsvedza. Inofananidzwa nezvimwe zvisingaenzaniswi scintillators, Ce: YAG kristaro inobata yakanyanya kupenya kushanda uye yakafara mwenje kupomba. Kunyanya, kukwirisa kwayo kukwirira i550nm, inoenderana chaizvo neiyo sensitivity kuona wavelength yesilicon photodiode kuona. Nekudaro, inokodzera kwazvo iwo scintillators emidziyo iyo yakatora iyo photodiode sema detectors uye iyo scintillators kuti vaone mwenje wakapihwa ma particles. Panguva ino, kugona kukuru kwekubatanidza kunogona kuwanikwa. Uyezve, Ce: YAG inogona zvakare kushandiswa kazhinji se phosphor mu cathode ray machubhu uye chena mwenje-inoburitsa diode.
CTH: YAG Makristasi
Ho, Cr, Tm: YAG -yttrium aluminium garnet laser makristasi akaumbwa ne chromium, thulium uye holmium ions yekupa lasing pa2,13 microns ari kuwana akawanda uye akawanda mashandisirwo, kunyanya muindasitiri yezvokurapa. inoshandisa YAG semubati. YAG's epanyama, anopisa uye ehupfumi maficha anozivikanwa uye anonzwisiswa neese laser dhizaini. Iyo ine yakafara mashandiro mukuvhiya, mazino, kuyedzwa kwemuchadenga, nezvimwe.